I-China Quality And Displayport Wholesale ku-HDMI Manufacturer - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhebula lekhompyutha > I-Displayport ku-HDMI
I-Display Port kuya ku-adaptha ye-HDMI ikuvumela ukuthi uxhume noma iyiphi idivayisi efakwe ngaphakathi ye-HDMI (HD TV, Monitor, Projector, njll.) Nge-Display Port interface (Desktop, Laptop).
1. Ukwethulwa Komkhiqizo weI-Displayport ku-HDMI I-adaptha
LokhuI-Displayport ku-HDMI I-adaptha Igolide Elifakwe (Owesilisa kuye Owesifazane) wamaDesktops anikwe amandla i-DisplayPort nama-Laptops kuma-HDMI Converter Connect Displays.
2.UmkhiqizoIpharamitha (Ukucaciswa) kwe-I-Displayport ku-HDMI
3.UmkhiqizoIsici Nokusetshenziswa kweI-Displayport ku-HDMI I-adaptha
Isixhumi Khombisa Port Male ukuze HDMI Female
Ukuhambisana nokucaciswa kwe-DisplayPort V1.1a ku-1.62 / 2.7Gbps isilinganiso sedatha (Izinga eliphansi le-bit / izinga eliphakeme kakhulu)
Isekela i-DPCD Rev.1.1 ne-HDCP 1.3 ngokhiye we-HDCP oshumekiwe
Ukulungiswa kuze kufike ku-1920X1200 / 1080p
4.UmkhiqizoDetails of the I-Displayport ku-HDMI I-adaptha
Ukuxhaswa kwe-DisplayPort, ukukhishwa kwe-HDMI
Sekela i-HDMI Resolution kuze kufike ku-4kx2k @ 60Hz
Sekela i-HDMI 18Gbps Bandwidth
Sekela umsindo ongacindezelwe njenge-LPCM
5.UmkhiqizoQualification of the I-Displayport ku-HDMI I-adaptha
I-HDMI Adopter ISO9001: 2015, RoHS Reach Compliant
6.Deliver, Shipping Futhi Ukukhonza weI-Displayport ku-HDMI I-adaptha
Izinsuku eziyi-15 ngo-10KI-Displayport ku-HDMI I-adaptha
7.Imibuzo Evame Ukubuzwa:
1.Q: Ingabe i-DisplayPort eya kwi-HDMI iphatha umsindo?
A: Yebo, i-DisplayPort isekela umsindo weziteshi eziningi nezici eziningi zomsindo eziphambili. I-DisplayPort kuma-adaptha we-HDMI afaka phakathi amandla wokuxhasa umsindo we-HDMI.
2.Q: Ngiyixhuma kanjani i-DisplayPort ku-HDMI?
A: Udinga nje i-DP ku-adaptha ye-HDMI kanye nekhebula le-HDMI ukuxhuma.
3.Q:Does this I-Displayport ku-HDMI I-adaptha support 4K?
A: Yebo, isekela ngokuphelele i-4K.
Amathegi ashisayo: I-Displayport ku-HDMI, China, Quality, Wholesale, Manufacturer
I-HDMI ku-VGA Cable